Indlela eya kwimpumelelo yeNtengiso ye-Intanethi | Martech Zone
Ukufikelela kwakhona kubeke ndawonye le infographic kwi indlela eya kwimpumelelo yentengiso kwi-Intanethi.
Njengeshishini elincinci elikhuphisanayo neevenkile ezinkulu ngexesha leholide, unokuhendeka ukuba udlale "Ngubani onokukhwaza kakhulu?" umdlalo. Ayisiyongxaki kuphela kwishishini elincinci 'ixesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali, kodwa inokubabeka ecaleni abathengi abathembekileyo osebenze nzima ukufumana. Ke, unokwenza ntoni ngeli xesha leholide ukuthengisa ishishini lakho elincinci kwaye uviwe ngaphandle kokukhuphisana okukhulu? Landela indlela eya empumelelweni kwi-infographic yethu ngoMgqibelo osencinci kwaye uzame ezi ngcebiso zintlanu ukukhuthaza ukubonelelwa kwendawo yakho ngexesha langoMgqibelo oShishinayo kunye nexesha leeholide.
Ngelishwa, ndicinga ukuba iReachlocal iphelise i-infographic kwindawo ebalulekileyo. Impumelelo ayiqali xa uguqula ukukhokelela kumthengi. Impumelelo yemidiya yoluntu iza ngokwenene xa uguqula loo mthengi abe ngumlandeli! Ukunxibelelana ngokufanelekileyo nesikhokelo sakho kunye nesiseko sabathengi sisinyanzelo, kwaye ubakhuthaze ukuba babelane ngamava abo aqinisekileyo kunye negama lakho ngendlela yokujonga, izindululo kunye nokwabelana kwezentlalo kuxa inkampani ibona ngokwenene iziphumo ebezizikhangela!
tags: kwi-infographicurhwebo onlineimpumelelo kwintengiso kwi-IntanethiUphando lwezoPhandoImidiya yokuncokola
Isilayidi: Yenza iifayile ngoku ngaphandle komthungo